Ukubuyekezwa kwesimo nokuhlaziywa, kanye nokuthi Thatha Isinyathelo kanye Nezindaba Zakamuva Zevidiyo, Izindaba Zemidiya, Amamephu nokuhlola kwe-ForRB namalungelo abantu.
Funda izindaba, izexwayiso, nemibiko evela kuKhomishini YaseMelika Yenkululeko Yezenkolo Yamazwe Ngamazwe (USCIRF).
IZINDABA: UN FORB NEWS
Sesha iwebhusayithi ye-UN kanye ne-ReliefWeb ukuze uthole izindaba zamanje nezomlando ezihlobene ne-ForRB namalungelo abantu.
UMKHANKASO WE-SPOTLIGHT: MYANMAR
Nxusa ilungu lakho leCongress ukuthi lisekele umthetho ofuna uhulumeni wase-US ogcwele kanye nokusabela kwamazwe ngamazwe ukuze kukhululwe abaholi ababoshiwe baseBurma futhi basekele amaqembu enkolo nezinhlanga ezibhekene nodlame oluqhubekayo.
Bamba iqhaza emikhankasweni yethu noma uzenzele eyakho ukuze abenzi bezinqubomgomo e-Washington nasemhlabeni jikelele bezwe ngabashampeli bezakhamizi zenkululeko yokholo nokholo lwamazwe ngamazwe.
AMASU OMKHANKASO NOKUQEQESHWA
Lesi sigaba sihlanganisa amathuluzi okuqinisa umthelela wakho ekukhulumeleni nasemikhankasweni. Lezi zinto ezisetshenziswayo ezimfishane ziveza izinqubo ezihamba phambili zamasu, imiyalezo, ukugqugquzela kanye nezindaba zokuthuthukisa.
Lapha ungakwazi ukufinyelela izinsiza nezinkundla ozidingayo ukuze uzibandakanye emikhankasweni yesenzo esiqondisiwe.
1) Okubalulekile kwe-ForB - IzinsizaLezi zinsiza zizosiza noma ubani onentshisekelo yenkululeko yenkolo yamazwe ngamazwe ukuthi afunde ngokuthi kungani ibalulekile emphakathini nokuthi yini angayenza ukuze avikele inkululeko yenkolo nezinkolelo zabantu emhlabeni wonke.
2) Izinsiza Zemiphakathi YokholoLezi zinsiza zizosiza abaholi bezenkolo ukuthi bazi ngezithiyo ezikhona manje zenkululeko yezenkolo yamazwe ngamazwe futhi bakhulume ngalezo zihloko emiphakathini yabo.
3) Izinsiza Zabacwaningi BezemfundoLezi zinsiza zizosiza abafundi ukuthi bafunde ngenkululeko yezenkolo yamazwe ngamazwe kanye namathuba nezinhlangano ezizobasiza benze umehluko.
4) Izinsiza Zezishoshovu NabameliLezi zinsiza zizosiza izishoshovu ukuthi ziqhubeke ziqonde futhi zimelele inkululeko yezenkolo yamazwe ngamazwe emiphakathini yazo yasendaweni, yesifunda, yezwe kanye neyamazwe ngamazwe.
5) Izinsiza Zabaholi AbancaneLezi zinsiza zizosiza abaholi abasebasha futhi bafunde ngenkululeko yezenkolo yamazwe ngamazwe futhi bathole amathuba nezinhlangano ezizobasiza benze umehluko.
6) Izinsiza Zabavikeli BezomthethoLezi zinsiza zizohlomisa abameli bamalungelo abantu ngezinsiza zocwaningo lwezomthetho kanye nokuxhumana kwenethiwekhi ukuze kuvikelwe amalungelo ayisisekelo abo bonke.
7) Izinsiza Zabenzi BezinqubomgomoLezi zinsiza zizosiza abenzi benqubomgomo ukuba bakhe izinqubomgomo neziphakamiso zokuqhubekisela phambili inkululeko yenkolo yamazwe ngamazwe.
Chofoza isithombe esingenhla ukuze ufinyelele Ilabhulali.
Sesha noma upheqa umtapo wolwazi ukuze uthole okuqukethwe kwe-multimedia nezinto zomthombo ezihlelwe ngezigaba nama-meta tags.
Imithetho Yokuhlubuka Nokuhlambalaza
I-Genocide & Atrocity Prevention
Amasistimu Kazwelonke & Ukuhlaziya
Ukushushiswa Ngenkolo Nokucindezelwa
INQUBOMGOMO KANYE NOMTHETHO WAseMelika
Ikhadi lamaphuzu leCongress yase-US
Igqamisa amarekhodi okuvota amalungu eSigele Sase-US kanye Nendlu Yabamele ngemithethosivivinywa, izinqumo, nezichibiyelo ezisekela inkululeko yenkolo yamazwe ngamazwe...
Ubani Ongimele kuKhongolose?
Sebenzisa ikheli lakho noma uchofoze kumephu ukuze uthole amaSenatha akho ase-US kanye Nomele.
I-IRF Legislative Tracker
Umsebenzi wamanje nomlando womthetho --Search Congress.gov futhi uhlole imithetho ehlobene ne-IRF, umsebenzi, nabalingisi.
I-US Senate & House IRF Amarekhodi Okuvota
I-IRFA 20th Anniversary Retrospective
Lo Mgubho Wokukhumbula iminyaka engu-20 we-1989 IRF Act ulanda imizamo yokuhlanganyela eyasiza ukuhlanganisa inkululeko yenkolo yamazwe ngamazwe ngaphakathi kwenqubomgomo yezangaphandle yase-US.
Izinsiza ze-USG ForRB
Sesha imithetho kaHulumeni wase-US, izinqubomgomo, amakhodi enhlangano, imicimbi, imibiko, njll: ICongress, Igatsha Eliphethe, I-Library of Congress, i-CRS, izishayamthetho zezwe, izivumelwano, njll.
Inkululeko yenkolo e-Afrika ngezwe
Inkululeko yenkolo e-Asia ngezwe
Inkululeko yenkolo eYurophu ngezwe
Inkululeko yenkolo eNingizimu Melika ngezwe
Inkululeko yenkolo ngokwezwe
Sesha futhi uhlole imithethosisekelo kazwelonke eyi-197 (leyo esalungiswa futhi esebenzayo) bese uqhathanisa ukuthi iyivikela kanjani noma iyikhawulele kanjani i-FORM.
Funda izivumelwano zamazwe ngamazwe nezivumelwano ezihlobene ne-ForRB namanye amalungelo abantu.
Izihloko Zokuhlaziya Izwe
Uhlu Lomhlaba Lwabantu Abancane kanye Nabantu Bomdabu (isizindalwazi esiseshekayo)
Abantu abangaphansi Kosongo (I-Interactive Map)
I-USCIRF Amazwe Akhathazekile Ngokukhethekile
I-Open Doors World Watch List (2020)
Inkululeko Yenkolo Yase-Uyghur
Ukuhlubuka & Ukuhlambalaza
I-Genocide & Nonya
I-FOB NETWERK EYI-ROUNDTABLE
Sesha izixhumanisi nemibiko yamathebula nezinkundla zesifunda ze-ForRB.
I-International Religious Freedom Roundtable isebenzisa i-Zoom ukuze isingathe imihlangano evame ukubizwa. Kulesi sigaba ungakwazi ukwenza i-RSVP, uthole i-Zoom, uthole usizo lokuxazulula izinkinga, futhi ufinyelele ama-handouts namaflaya asuka kuleli khasi.
I-IRF ROUNDTABLE (DC) IMICIMBI
Ikhalenda nokufakwa kuhlu kokulandelana kwezenzakalo ze-DC IRF Roundtable.
Lesi sikhungo sokumela esiku-inthanethi, esigcwele amathuluzi esenzo nolwazi, singasetshenziswa ekuvikeleni nasekuthuthukiseni inkululeko yenkolo yomhlaba wonke, yenkolelo, nekanembeza.
IMIKHANKASO - THATHA ISINYATHELO
I-Coalition Burma Congress Campaign
UHLU LWEMICIMBI YE-IRF OLUYAZAYO
Imicimbi ye-IRF Roundtable (DC)
Chofoza isixhumanisi ukuze ufinyelele izinsiza ezikhethiwe
Izisekelo Zenkululeko Yezenkolo: Lezi zinsiza zizosiza noma ubani onentshisekelo yenkululeko yenkolo yamazwe ngamazwe ukuthi afunde ngokuthi kungani ibalulekile emphakathini nokuthi yini angayenza ukuze avikele inkululeko yenkolo nezinkolelo zabantu emhlabeni wonke. Chofoza ukuze ufinyelele izindaba ezivela emhlabeni wonke, izindlela ongabandakanyeka ngazo, nezixhumanisi zokufinyelela kumathebula ajikelezayo nemicimbi. Finyelela izinsiza
Imiphakathi Yokholo: Lezi zinsiza zizosiza abaholi bezenkolo ukuthi bazi ngezithiyo ezikhona manje zenkululeko yezenkolo yamazwe ngamazwe futhi bakhulume ngalezo zihloko emiphakathini yabo. Chofoza ukuze ufinyelele ezindabeni, ulwazi lwamanxusa esifunda asebenza ngokuzikhandla ukukhuthaza i-IRF, kanye nezinsiza zesevisi ukuze abaholi babelane nemiphakathi yabo. Finyelela izinsiza
Abacwaningi Bezemfundo: Lezi zinsiza zizosiza abafundi ukuthi bafunde ngenkululeko yezenkolo yamazwe ngamazwe kanye namathuba nezinhlangano ezizobasiza benze umehluko. Chofoza ukuze ufinyelele izindaba nolwazi mayelana ne-IRF, amathuba okufundela umsebenzi, ucwaningo lwezemfundo, nokunye okuningi. Finyelela izinsiza
Izishoshovu Nabameli: Lezi zinsiza zizosiza izishoshovu ukuthi ziqhubeke ziqonde futhi zimelele inkululeko yezenkolo yamazwe ngamazwe emiphakathini yazo yasendaweni, yesifunda, yezwe kanye neyamazwe ngamazwe. Chofoza ukuze ufinyelele ulwazi mayelana nezindaba zamanje zenkululeko yezenkolo emhlabeni wonke, amathuluzi okumela, amasu esikhathi esidlule, nezindlela ongadala ngazo umkhankaso wakho wokuthuthukisa i-IRF. Finyelela izinsiza
Abaholi Abancane: Lezi zinsiza zizosiza abaholi abasebasha futhi bafunde ngenkululeko yezenkolo yamazwe ngamazwe futhi bathole amathuba nezinhlangano ezizobasiza benze umehluko. Chofoza ukuze ufinyelele izindaba nolwazi mayelana ne-IRF, amathuba okufundela umsebenzi, ucwaningo lwezemfundo, nokunye okuningi. Finyelela izinsiza
Abavikeli Bezomthetho: Lezi zinsiza zizohlomisa abameli bamalungelo abantu ngezinsiza zocwaningo lwezomthetho kanye nokuxhumana kwenethiwekhi ukuze kuvikelwe amalungelo ayisisekelo abo bonke. Chofoza ukuze ufinyelele amathuluzi okucwaninga aku-inthanethi, izibuyekezo ze-IRF, ulwazi ngezindaba zamanje, namanethiwekhi omthetho. Finyelela izinsiza
Abenza Amapholisi: Lezi zinsiza zizosiza abenzi benqubomgomo ukuba bakhe izinqubomgomo neziphakamiso zokuqhubekisela phambili inkululeko yenkolo yamazwe ngamazwe. Chofoza ukuze ufinyelele ukuhlaziya, ukubuyekezwa kwe-IRF, ulwazi ngezinkinga zamanje, nokuthi ungazibandakanya kanjani ne-IRF ngomthetho nangokumela. Finyelela izinsiza
Funda kabanzi mayelana nezindaba ezihlobene nenkululeko yenkolo nezinkolelo (ForRB).
Izindlela ezingcono kakhulu zokumela nemikhankaso.
Khuthaza futhi uhole ushintsho kwababuthaka nabacindezelwe. Dala noma ujoyine umkhankaso.
Ukusebenzelana Ngesithunzi Sabo Bonke
Xhumana nathi nge-imeyili
Isikhungo Senkululeko Esiku-inthanethi
Nikela/Sekela Isikhungo Senkululeko
Copyright © 2021 21Wilberforce | Inqubomgomo yobumfihlo | Imigomo Yokusebenzisa | Idizayinwe ngu I-iCatalyst CKS